Genesisy 13 | Baiboly | Fandikan-tenin’ny Tontolo Vaovao
13 Taorian’izany, dia niala tany Ejipta ka niakatra nankany Negeba+ i Abrama sy ny vadiny mbamin’izay rehetra nananany. Ary niaraka taminy koa i Lota. 2 Ary nanana biby fiompy sy volafotsy ary volamena be dia be i Abrama.+ 3 Ary niala tany Negeba izy ka nifindrafindra toby nankany Betela, nankany amin’ilay toerana nasiany ny tranolainy tamin’ny voalohany, teo anelanelan’i Betela sy Ay,+ 4 dia teo amin’ny toerana nisy ilay alitara nataony tamin’ny voalohany.+ Ary niantso ny anaran’i Jehovah+ teo i Abrama. 5 Ary nanana ondry sy omby ary tranolay koa i Lota, izay niaraka tamin’i Abrama. 6 Koa tsy antonona azy mianaka intsony ilay tany mba hiarahany monina, satria nihamaro ny fananan’izy ireo, ka tsy afaka niara-nonina izy.+ 7 Ary nifanditra ny mpiandry ny biby fiompin’i Abrama sy ny an’i Lota. Tamin’izany fotoana izany, dia ny Kananita sy ny Perizita no nonina teo amin’ilay tany.+ 8 Koa hoy i Abrama tamin’i Lota:+ “Aoka re mba tsy hisy fifandirana intsony eo amintsika, sy eo amin’ny mpiandry ny biby fiompiko sy ny anao, fa mpirahalahy isika.+ 9 Tsy eo anoloanao angaha moa ny tany rehetra ka azonao aleha? Aoka re mba hisaraka amiko ianao. Raha miankavia ianao, izaho hiankavanana. Fa raha miankavanana kosa ianao, izaho hiankavia.”+ 10 Koa nanopy ny masony i Lota, dia nahatazana ny Faritr’i Jordana manontolo+ hatrany Zoara.+ Azon-drano tsara ilay faritra manontolo talohan’ny nandravan’i Jehovah an’i Sodoma sy Gomora. Eny, tahaka ny zaridainan’i Jehovah+ ilay faritra, tahaka ny tany Ejipta. 11 Koa nifidy ny Faritr’i Jordana manontolo i Lota, ka namindra ny tobiny niantsinanana. Dia nisaraka izy mianaka. 12 Ary nonina teo amin’ny tany Kanana i Abrama, fa i Lota kosa nonina teny amin’ireo tanànan’ny Faritr’i Jordana.+ Farany dia nanangana ny tranolainy teo akaikin’i Sodoma i Lota. 13 Ary ratsy fanahy ny olona tao Sodoma sady nanota be tamin’i Jehovah.+ 14 Ary hoy i Jehovah tamin’i Abrama, taorian’ny nisarahan’i Lota taminy: “Atopazo ange ny masonao, azafady e! Ary avy eo amin’ny toerana misy anao eo, dia mijere mianavaratra sy mianatsimo sy miantsinanana ary miankandrefana.+ 15 Fa homeko anao sy ny taranakao mandritra ny fotoana tsy voafetra, ireo tany rehetra tazanao ireo.+ 16 Ary hataoko tahaka ny vovoka amin’ny tany ny taranakao. Raha misy mahisa ny vovoka amin’ny tany, dia ho voaisa koa ny taranakao.+ 17 Koa mitsangàna, ka mandehana mitety ilay tany amin’ny lavany sy ny sakany, satria ianao no homeko azy io.”+ 18 Dia nonina an-tranolay foana i Abrama. Tatỳ aoriana dia tonga teo amin’ireo hazobe tao Mamre+ tany Hebrona+ izy, ka nonina teo. Ary nanorina alitara ho an’i Jehovah teo izy.+